အကောင်းဆုံး Anti-Aging ဖြည့်စွက်ချက် - Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
ပင်မစာမျက်နှာ > နီကိုတီနိုက်မွန်နွန်ကူလိုotide (NMN)
တစ် ဦး 2019- လေ့လာမှုပြီးနောက်နိဂုံးချုပ် Nicotinamide Mononucleotide အကယ်၍ စားသုံးမှုကိုသတ်မှတ်ထားသောကန့်သတ်ချက်မှကန့်သတ်ထားပါကလူစားသုံးမှုအတွက်အန္တရာယ်ကင်းသည်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအတော်များများသည်သူတို့၏စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လာသည်။ ဤရွေးချယ်မှုများပြားလာခြင်းကြောင့်ဝယ်လက်များရှုပ်ထွေးသွားသည် Nictonimade Mononucleotide (NMN) ဖြည့်စွက်ချက် သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်အရ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်နီကိုတင်းနိုက်မွန်နိုနူကူလွိုက် (NMN) ၏အကောင်းဆုံးအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဖြည့်စွက်ဆေးသည် Cofttek ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
Cofttek သည် A + အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးဈေးကွက်တွင် ၁၂ နှစ်နီးပါးရှိခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီမှပေးသော NMN အမှုန့်သည်နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည့်သိသာထင်ရှားသောလူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအတွက် NMN ကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည့်ကုမ္ပဏီများမှထုတ်လုပ်သည့်သုံးဆဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ပြီးဆေးဝါးအဆင့်တန်း NMN ဖြစ်သည်။ The NMN အမှုန့် Cofttek မှထောက်ပံ့ထားသောကြောင့်၎င်းသည်အလွယ်တကူခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့စုပ်ယူနိုင်အောင်ပံ့ပိုးပေးပြီးထုတ်ကုန်များ၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုနှင့်၎င်း၏ဇီဝကမ္မလုပ်ဆောင်မှုများကိုတိုးမြှင့်သည်။ ပိုအရေးကြီးတာကဒီအမှုန့်ဟာများများလာပြီးသုံးလကြာသိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးသောအချက်မှာဤသည်သည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်အသုံးပြုသူအဆင့်မြင့်မားသောအကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ထိရောက်သောထုတ်ကုန်များကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပို့ဆောင်သောကုမ္ပဏီမှလာသည်။
သငျသညျသဘာဝကျကျ Nmn တိုးမြှင့်သလဲ?
သငျသညျ Nmn ယူပြီးရပ်တန့်သည့်အခါဘာဖြစ်သွားမလဲ
အဘယ်ကြောင့်အလွန်အကျွံ NADH မကောင်းသလဲ?
ပိုကောင်းတဲ့ Nmn သို့မဟုတ် NR ကဘာလဲ
အကောင်းဆုံး Nmn ဖြည့်စွက်ကဘာလဲ?
သင်ဘယ်လောက် NMN ယူသင့်သလဲ
Nmn သည် b3 နှင့်အတူတူလား?
NAD + သည်မည်သည့်အစားအစာတွင်အများဆုံးပါဝင်မှုရှိသနည်း။
ကနေဒါ Nmn ကိုဘယ်မှာဝယ်လို့ရပါသလဲ
ကျွန်ုပ် NAD + ကိုမည်သို့တိုးပွားစေနိုင်သနည်း။
NMN နဲ့ TMG ကိုသုံးသင့်သလား။
Nmn သည် niacin လား?
နီကိုတင်းနိုက်သည်ရိုင်ဗိုဆိုက်ဒ် BP ကိုလျှော့ချသလား။
ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်နီကိုတီနိုက်မွန်နွန်ကူလိုotide (NMN) လိုအပ်သနည်း။
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ကိုအသုံးပြုသည်
Bulk တွင် Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အမှုန့်ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။
နီကတီနိုက်မွန်တွန်နွန်ကလိတ် (1094-61-7) သို့မဟုတ် NMN သည်ကျွန်ုပ်တို့စားသောအစားအစာအများစုအတွင်းသဘာဝကျကျတည်ရှိသည့်ဘေ့။ ၎င်းကိုထောပတ်သီး၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ သခွားသီး၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ သို့သော်ဤအစားအစာများမှရရှိသော NMN ပမာဏသည်အဓိကကိုယ်ခန္ဓာလုပ်ဆောင်မှုများကိုမထောက်ပံ့နိုင်သဖြင့်လူတို့အား NMN ဖြည့်စွက်ဆေးများကိုမကြာခဏသောက်ရန်အကြံပေးသည်။ သို့သော် NMN သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဘယ်ကြောင့်အလွန်အရေးကြီးသနည်း။
Nicotinamide Mononucleotide သို့မဟုတ် NMN သည် Nikotinamide Adenine Dinucleotide သို့မဟုတ် NAD + အတွက်ရှေ့ပြေးဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် NMN ဆိုတာဆဲလ်တွေအတွင်းမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဓာတုဓာတ်ပြုမှုများမှတဆင့် NAD + အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသောဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် NAD + သည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယူဆရသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ circadian rhythm ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းပေးခြင်း၊ cellular energy ထုတ်လွှတ်ရန်အာဟာရများကိုဖြိုခွဲခြင်းနှင့်အဓိကအင်ဇိုင်းများတုံ့ပြန်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်း၊ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ NAD + ကိုခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်တိုင်းတွင်တွေ့ရှိရသော်လည်း၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုသည်အသက်အရွယ်နှင့်ကျသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ NAD + ထုတ်လုပ်မှုကိုကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းတိုးပွားစေရန်လူတစ် ဦး စားသုံးနိုင်သောအစားအစာများမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဆဲလ်အတွင်းရှိ NAD + အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသော NAD + ရှေ့ပြေးလိုအပ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကျဆင်းမှုကိုမျှတစေသည်။ ဒီနေရာမှာ NMN ဖြည့်စွက်များအသုံးပြုခြင်းကစားသို့ကြွလာသည်။
NMN သည်အင်ဆူလင်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်စေပြီးဇီဝဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများအပြင်ဂလူးကို့စ်သည်းခံစိတ်ကိုရရှိစေသည်။ အထူးသဖြင့် NMN ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ဆီးချို၊ အသည်းရောဂါနှင့်အဝလွန်ခြင်းကဲ့သို့သောဇီဝဖြစ်ပျက်မှုအခြေအနေများကိုသက်သာစေရန်ကူညီနိုင်သည်။
nicotinamide ၏အုပ်ချုပ်ရေး မိုနိုနျူကလီးအိုရိုက် (NMN) အိုမင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် dysfunctions.Nicotinamide mononucleotide (NMN) ဖြည့်စွက်ဆေးသည်သက်ကြီးရွယ်အိုကြွက်များ၏ aorta တွင်အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုတားဆီးပေးသော MiRNA စကားရပ်ပရိုဖိုင်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်။
NMN ကိုကြွက်များကိုဘေးကင်းစွာပေးနိုင်သည်။ သဘာဝအားဖြင့်ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ သခွားသီး၊ လေ့လာမှုအသစ်အရ NMN သည်သောက်သုံးရေတွင်ပျော်ဝင်ပြီးကြွက်များကိုပေးသည့်အခါ ၃ မိနစ်အောက်တွင်သွေးကြောထဲရောက်သွားသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ထိုကဲ့သို့သောအလယ်အလတ်နှစ်ခုဖြစ်သောနီကိုတင်းနိုက်ဒီရိုဘိုက် (NR) နှင့်နီကိုတီနိုက် mononucleotide (NMN) တို့ကိုအခြားသူများထက် ပို၍ ကျယ်ပြန့်စွာလေ့လာခဲ့ပြီးသုတေသနကအားတက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများအရဒီရှေ့ပြေးရောဂါများကိုဖြည့်စွက်ခြင်းသည် NAD + အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးတဆေး၊ တီကောင်များနှင့်ကြွက်များ၏သက်တမ်းကိုရှည်စေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလေ့လာမှုအရ NMN သည်အူကနေ ၂-၃ မိနစ်အတွင်းသွေးလည်ပတ်မှုသို့အလျင်အမြန်စုပ်ယူပြီး ၁၅ မိနစ်အတွင်းတစ်ရှူးများသို့သွေးလည်ပတ်မှုမှဖယ်ရှားပေးသည်ကိုရှင်းလင်းစွာပြသသည်။
Resveratol နှင့် NMN နှစ်ခုစလုံးသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ရှိဆဲလ်များမိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုခဏကြာယူပြီးရပ်တန့်လိုက်ရင်အဲဒါတွေကိုမယူခင်မှာသင်ရှိနေတဲ့ပြည်နယ်ကိုချက်ချင်းပြန်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီပြောင်းလဲမှုကဆဲလ်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးလို့ပဲ။
“ ၁၂ လကျော်အကြာမှာ NMN ကိုကြွက်တွေကို NMN ကိုပေးတာကအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြတယ်။ Imai ၏အဆိုအရရလဒ်များကိုလူသားများသို့ဘာသာပြန်ပေးခြင်းသည် NMN သည်လူတစ် ဦး အားအသက် ၁၀ မှ ၂၀ နှစ်အကြားရှိဇီဝြဖစ်စဉ်ကိုပေးနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
အကောင်းဆုံး Anti-Aging ဖြည့်စွက်မှု ၁၂ ခု
Nicotinamide riboside နှင့် nikotinamide mononucleotide
beta carotene ကိုသောက်ပါ။
သံပုရာ Balm အရွက်လက်ဖက်ရည်သောက်ပါ။
သင့်ရဲ့ antioxidants တက်
အညစ်အကြေးများရမည့်အစား Self-Tanner ကိုသုံးပါ။
David Sinclair ကယူသည်:
Resveratrol - တစ်နာရီ ၁ ဂရမ် - ဒိန်ချဉ်နှင့်နံနက် (မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ယူရမည်ကိုကြည့်ပါ) Nicotinamide Mononucleotide (NMN) - ၁ ဂရမ် / နေ့စဉ် - နံနက်များ (မည်သည့်နေရာတွင် ၀ ယ်ရမည်ကိုကြည့်ပါ) Metformin (ဆေးညွှန်းဆေး) - ၁ ဂရမ် / တစ်နေ့လျှင် - နံနက် ၀.၅ ဂရမ်နှင့် 1 ဂ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သည့်နေ့များ မှလွဲ၍ ညအချိန်တွင်။
ပါးစပ်ဖြင့်သောက်သောအခါနီကိုတင်းမိုင်ဒီရိုဘိုက်သည်ရေတိုအသုံးပြုသောအခါဘေးကင်းနိုင်သည်။ နီကိုတင်းနိုက်ရိiboside၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာများသောအားဖြင့်ပျော့ပျောင်းသည်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင်အစာအိမ်နှင့်အူရောင်ခြင်း၊ ဖောင်းပွခြင်းသို့မဟုတ်အလွန်ယားခြင်းနှင့်ချွေးခြင်းကဲ့သို့အရေပြားပြproblemsနာများပါ ၀ င်သည်။
ပါးစပ်ဖြင့်သောက်သောအခါ - Resveratrol သည်အစားအစာများတွင်တွေ့ရသောပမာဏများ၌အသုံးပြုသောအခါဘေးကင်းပါသည်။ နေ့စဉ်သုံးလအထိ 1500 မီလီဂရမ်ထိထိုးသွင်းပါက resveratrol သည်အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။ နေ့စဉ် ၂၀၀၀-၃၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိမြင့်မားသောဆေးများကို ၂-၆ လအထိဘေးကင်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော်ဤ resveratrol ပိုမိုမြင့်မားသောဆေးများသည်အစာအိမ်ပြproblemsနာများဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်။
Nicotinamide riboside သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ်ရှိလျှင်ဘေးကင်းနိုင်သည်။ လူ့လေ့လာမှုများတွင်တစ်နေ့လျှင် ၁၀၀၀ မှ ၂,၀၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုများမရှိခဲ့ပါ။ သို့သျောလညျးလူ့လေ့လာမှုအများစုမှာကြာချိန်တိုပြီးပါဝင်သူအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ၎င်း၏လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုတိကျသောစိတ်ကူးတစ်ခုအနေဖြင့်ပိုမိုခိုင်မာသည့်လူ့လေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤပိုလျှံ NADH သည် NADH နှင့် NAD + အကြား redox balance ကိုချိုးဖျက်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးတွင် oxidative stress နှင့် metabolic syndromes အမျိုးမျိုးသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
NR ကို NAD + ၏အလွန်ထိရောက်သောရှေ့ပြေးအဖြစ်မကြာခဏမှတ်ယူတတ်ကြသည်။ သို့သော်၎င်း၏ဝမ်းကွဲမော်လီကျူး NMN သည် Basis တွင်ပါဝင်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ကလေးငယ်သစ်အဖြစ်မျက်ခုံးများကိုမြှင့်တင်နေသည်။
ဘယ် Nmn ဖြည့်စွက်စာသည်အကောင်းဆုံးလဲ။
NAD + ရွှေ Liposomal NMN ။
NAD + အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်စေသည့်နည်းလမ်းများသည်သက်ကြီးသတ္တဝါဟောင်းများတွင် mitochondrial လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်ပြသခဲ့ပြီးအသက်အရွယ်နှင့်အတူဖြစ်ပေါ်သောဆုံးရှုံးမှုများကိုပြန်ပြောင်းပေးသည်။ nicotinamide mononucleotide (NMN) ၏အုပ်ချုပ်မှုသည်အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကမောက်ကမဖြစ်မှုများကိုလျော့ပါးစေကြောင်းပြသသည်။
လေ့လာမှုများအရ Nicotinamide Mononucleotide သို့မဟုတ် NMN သည်လူသားများအတွက်လုံခြုံမှုရှိသော်လည်းလူသားများတွင် NMN သောက်သုံးမှုနှင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံးသောက်သုံးရေနှင့်ကြိမ်နှုန်းကိုတွက်ချက်ရန်သုတေသနပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်ယနေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်လေ့လာမှုများအရအမျိုးသားများအတွက်တစ်နေ့လျှင် ၅၀၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးသောဆေးသည်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်နီကိုတင်းနိုက်မွန်နူကူလိုတိတ်သည်ဆေးပြားများနှင့်အမှုန့်များအပါအဝင်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။ NMN ဖြည့်စွက်ပေးသူများကပါးစပ်ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ NAD + ထုတ်လုပ်မှုကိုမြှင့်တင်ရာ၌အတော်လေးထိရောက်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားပြောဆိုချက်ကို Slc500a12 တစ် ဦး, nikotinamide ဘေ့ Transporter, အူထဲမှာ NMN ၏စုပ်ယူနှင့်အတူကူညီပေးသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
NMN မဟုတ်ဘူး။ NMN သည်ဗီတာမင် B3 အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်လူသားများတွင် NAD တိုးပွားစေကြောင်းသက်သေပြရန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများမရှိပါ။ NMN သည်ဆဲလ်ထဲသို့ ၀ င်နိုင်စွမ်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသောဖော့စဖိတ်ပါဝင်သောကြောင့်ဗီတာမင်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်မော်လီကျူးအမျိုးအစားလည်းမဟုတ်ပါ။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် NAD အဆင့်များကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည့်အချို့သောအစားအစာများရှိသည်။ သူတို့ထဲကတချို့ပါဝင်သည်:
နို့ထွက်ပစ္စည်းနို့ - နွားနို့၏နို့သည် Riboside Nicotinamide (RN) ၏အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်ဟုသုတေသနပြုချက်ကဖော်ပြသည်။ လတ်ဆတ်သောနွားနို့နို့တွင် NAD + ၃.၉ μmolပါဝင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လန်းဆန်းစေသောနို့တစ်ခွက်ကိုခံစားနေစဉ်သင်အမှန်တကယ်ငယ်ရွယ်ပြီးကျန်းမာလာသည်။
ငါး - ငါးမျှားရတာပျော်စရာနောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါ။ တူနာ၊ ဆော်လမင်နှင့်ငါးများကဲ့သို့ငါးမျိုးစိတ်များသည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် NAD + ၏ကြွယ်ဝသောရင်းမြစ်များဖြစ်သည်။
မှိုများ - မှိုများကိုများသောအားဖြင့်လူအများစုတို့သည်ပုံမှန်အစားအစာတွင်ပုံမှန်အစားအစာဖြစ်သည်။ သို့သော်မှိုများအထူးသဖြင့် crimini မှိုများသည်လည်း NAD အဆင့်တိုးမြှင့်ရာတွင်အထောက်အကူပြုကြောင်းသင်သိပါသလား။ ဟုတ်တယ်၊ အမှန်ပဲ။ ထို့ကြောင့်မှိုများကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ။
တဆေး - တဆေးသည်ပေါင်မုန့်နှင့်အခြားကိတ်မုန့်ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုသည်။ တဆေးတွင် NAD ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်သော Riboside Nicotinamide (RN) ပါရှိသည်။ သင်ကိတ်မုန့်ကိုလည်ပတ်သည့်အခါသင်အကြိုက်ဆုံးမုန့်ဖုတ်များ၊ တစ်ချိန်တည်း NAD အဆင့်တိုးမြှင့်စဉ်သင်အကြိုက်ဆုံးအစားအစာကိုခံစားပါ။ ဘယ်လောက်အေးလိုက်မလဲ။
အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ - အစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များတွင်၎င်းတို့တွင်အာဟာရအမျိုးမျိုးပါဝင်ပြီးနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အကျိုးရှိသည်။ မကြာမီကအစိမ်းရောင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် NAD ၏ကောင်းကျိုးများအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်အချို့သည်ပဲနှင့်ကညွတ်ပါဝင်သည်။
အစေ့လုံး - အစောပိုင်းတွင်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်း Vitamin B3 တွင် NAD ၏ရှေ့ပြေး RN လည်းပါ ၀ င်သည်။ သို့သော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အစားအစာများသို့မဟုတ်အစေ့များချက်ပြုတ်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ၎င်းတို့သည်အာဟာရသာမကဗီတာမင်များလည်းဆုံးရှုံးသွားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်သည်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုသာစားသုံးသင့်ပြီး၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများအစားအနှံတစ်ခုလုံးကိုလည်းစားသုံးသင့်သည်။
အရက်ယမကာများကိုလျှော့ချခြင်း - NAD သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဇီဝဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်များကိုထိန်းသိမ်းရန်တာဝန်ရှိသည်။ အရက်သည်ဤဖြစ်စဉ်များကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့် NAD ၏ထိရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူတို့သည်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းသောကြောင့်အရက်အလွန်အကျွံသောက်ခြင်းကိုရှောင်သင့်သည်။
Niacin flush ဆိုသည်မှာဖြည့်စွက် niacin (Vitamin B3) ပမာဏများစွာသောက်သုံးခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ niacin သည်သင်၏အရေပြားအတွင်းပိုင်းသွေးကြောမျှင်ကလေးငယ်များကိုဖြေးညှင်းစေသည့်အခါ flush သည်အရေပြား၏မျက်နှာပြင်သို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးပွားစေသည်။ ဗီတာမင် B3 (niacin) ဖြည့်စွက်ချက်များနှင့်မတူသည်မှာနီကိုတင်းနိုက်ရိဘိုဆိုဒ်သည်မျက်နှာသန့်ရှင်းမှုမဖြစ်စေရပါ။
NMN သည်ရိုင်ဘတ်နှင့်နီကိုတင်းနိုက်မှဆင်းသက်လာသောဘေ့ဖြစ်သည်။ Nikotinamide riboside (Niagen) ကဲ့သို့ပင် NMN သည် niacin မှဆင်းသက်လာပြီး NAD + ၏ရှေ့ပြေးအရာဖြစ်သည်။ NMN Canada: Nicotinamide mononucleotide သည်ကနေဒါတွင်အစားအသောက်ဖြည့်စွက်အနေဖြင့်ရောင်းရန်မရရှိနိုင်ပါ။
နှစ်များတစ်လျှောက်လူသားများတွင် NMN သုံးစွဲမှုသည်အန္တရာယ်ကင်းခြင်းရှိမရှိလေ့လာရန်အတွက်များစွာလေ့လာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများက Nicotinamide Mononucleotide သုံးစွဲမှုသည်၎င်း၏ဆေးညွှန်းကိုကန့်သတ်ထားသည့်အခါလုံးဝအန္တရာယ်ကင်းကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသားများသည်နေ့စဉ် ၅၀၀ မီလီဂရမ်အောက်ရှိသောနေ့စဉ်ဆေးကိုသောက်ရန်အကြံပေးသည်။ သို့သော် FDA က NMN ကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောဆေးအဖြစ်အတည်ပြုခြင်းမရှိသေးကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၌ဓာတ်မတည့်မှုသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြissuesနာများရှိပါက NMN ဖြည့်စွက်ဆေးများမစတင်မီသင့်ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည်။
NAD နှင့် NMN သည်လူကြိုက်များသော anti-aging ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြစ်ပြီးကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိသည်။
သဘာဝကျကျ NAD အဆင့်တိုးမြှင့်
Nicotinamide Riboside အစားအသောက်ဖြည့်စွက်
သင်၏ NAD + အဆင့်များကိုတိုးတက်စေရန်သင် Resveratrol ၏ဇီဝရရှိနိုင်မှုကိုကူညီပေးသောအပြည့်အဝဒိန်ချဉ်ပါသည့် Resveratrol ကဲ့သို့ Sirtuin Activator ကဲ့သို့သောနှောင့်နှေးသော NMN ဆေးတောင့်များကိုသင်ယူနိုင်သည်။
သင်သည်လက်ရှိ NMN ကိုယူနေသည်သို့မဟုတ်စတင်ရန်စဉ်းစားနေပါက၎င်းကို methylation အတွက်ထပ်ဆောင်းအထောက်အပံ့တစ်ခုအဖြစ် TMG နှင့်တွဲရန်စဉ်းစားပါ။ အခြားအသုံး ၀ င်သောအခြားသောအလှူရှင်များသည် methyl B6, B12 နှင့် folate တို့ပါဝင်သည်။
nikotinamide နှင့် nikotinamide riboside တို့ရဲ့ခြားနားချက်ကဘာလဲ။ (3)
Niacin သည်ခန္ဓာကိုယ် NAD အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည့်နီကိုတင်းဓာတ်၏ပုံစံဖြစ်သည်။ Nicotinamide သည် NAD နှင့်ပိုမိုဆင်တူပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းသော niacin ၏ amide တစ်ခုဖြစ်သည်။ Nicotinamide riboside သည်မတူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောနီကိုတင်းနိုက်၏ဒြပ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
nikotinamide riboside ကဲ့သို့ပင် NMN သည် niacin မှဆင်းသက်လာသည်။ လူတို့တွင် NMN ကို သုံး၍ နီကိုတင်းနိုက်ဒင်းနူကူလိုတိတ် (NADH) ထုတ်ရန်အင်ဇိုင်းများရှိသည်။ ကြွက်များတွင် NMN သည် ၁၀ မိနစ်အတွင်း Slc10a12 NMN သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတစ်ဆင့် NAD + သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။
Nicotinamide riboside သည်သဘာဝအားဖြင့်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) သည်ကယ်လိုရီဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ၏အကျိုးရှိသောသက်ရောက်မှုများ၏အရေးပါသောဖျန်ဖြေသူဖြစ်ပြီးကယ်လိုရီကန့်သတ်ချက်အတု၏ဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မကြာသေးမီကကျန်းမာသောလူလတ်ပိုင်းအရွယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများတွင်နီကိုတင်းနိုက်ရိုင်ဗိုစိုင်ဒီဒဆေးကိုပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်လေ့လာမှုပြီးစီးခဲ့ပြီး ၆ ပတ်အပိုဖြည့်တင်းခြင်းသည်နှလုံးသွေးပေါင်ချိန် (SBP) အား ၈ မီလီမီတာဟဂ်ဂရမ်အားဖြင့် SBP ၏ ၁၂၀-၁၃၉ မီလီမီတာဟဂ်ဂဟမ်အားဖြင့်လျှော့ချကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆင့်6သွေးတိုးရောဂါ) ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, သွေးလွှတ်ကြောတောင့်တင်းခြင်းကိုလျှော့ချ, အားဖြင့် CVD နှင့်ဆက်စပ်ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှု၏အားကြီးသောလွတ်လပ်သောခန့်မှန်း။
အပင်များနှင့်သတ္တဝါများတွင်တွေ့ရပြီးဂျုံ၊ ခရုခွံ၊ ဟင်းနုနွယ်ရွက်နှင့်သကြား beets အပါအ ၀ င်အစားအစာများစွာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘီတိန်သည် zwitterionic quaternary ammonium ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး trimethylglycine, glycine betaine, lycine နှင့် oxyneurine ဟုလည်းလူသိများသည်။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှလာသည့်အရောင်အတွက်အာဟာရဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အကောင်းဆုံးအိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုကာကွယ်သည့်အစားအစာ ၁၀ ခုတွင်ဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
Hydrating Mask ကိုသုံးပါ။
တစ် ဦး တောက်ပဖောင်ဒေးရှင်းကိုရွေးချယ်ပါ
အညစ်အကြေးများရမည့်အစား Self-Tanner ကိုသုံးပါ
lipoic အက်ဆစ်နှင့်အတူတန်ပြန် fructose
ဗီတာမင်စီသည်ခန္ဓာကိုယ်၏သဘာဝကော်လာဂျင်ဖွဲ့စည်းမှုတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ of ကြောင့်အိုမင်းခြင်းလက္ခဏာကိုကာကွယ်ရန်လည်းကူညီနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးသွားသောအသားအရေကိုကျန်းမာစေပြီးအချို့အခြေအနေများတွင်အရေးအကြောင်းများကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဗီတာမင်စီလုံလောက်စွာစားသုံးခြင်းသည်အရေပြားခြောက်သွေ့မှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကာကွယ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။
အိုမင်းခြင်းသည်အချိန်နှင့်သက်ဆိုင်ပြီးလူ့ခန္ဓာကိုယ်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုအချိန် - ကူညီပေးသောနောက်ကြောင်းပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုမင်းခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍ မရနိုင်သော်လည်းအိုမင်းခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်သော်လည်းသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုမည်သို့နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကတိပေးခဲ့သည်။ ဤသုတေသနမှ ဆက်လက်၍ အိုမင်းခြင်းဆန့်ကျင်သောဖြည့်စွက်ဆေးများအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်သောအိုမင်းခြင်းကိုခံသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသောဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ဒြပ်ပေါင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များအားစိတ်စွဲမှတ်စေသောသိသာထင်ရှားသည့်အိုမင်းခြင်းဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိရှိသောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုမှာ NMN သို့မဟုတ် Nicotinamide Mononucleotide ဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် NMN နှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နီကိုတင်းနိုက် mononucleotide ၏အကောင်းဆုံးအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဖြည့်စွက်ဆေးများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးထားသည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အထိ NMN အသုံးပြုမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောလေ့လာမှုအားလုံးကိုတိရိစ္ဆာန်များအပေါ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများကအလားအလာရှိသောရလဒ်များကိုပြသခဲ့သည်။ သို့သော်ဤရလဒ်သည်လူသားများတွင် NMN အသုံးပြုမှု၏အားသာချက်များကိုဖော်ပြရန်မလုံလောက်ပါ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် NMN စားသုံးမှုလုံခြုံမှုနှင့်လူ့သွေးအတွင်းရှိအချိန်သင်တန်းကိုလေ့လာရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကအလားအလာရှိသောရလဒ်များကိုကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ အလွန်မြင့်မားသော BMI၊ သွေးဂလူးကို့စ်နှင့်သွေး triglycerides ခံစားရသောသက်ကြီးအမျိုးသမီး ၅၀ တွင် NMN စားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကအောင်မြင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်လေ့လာမှုကိုသတ်မှတ်ထားသောအသက်အရွယ်ရှိအမျိုးသမီးများအားကန့်သတ်ထားသဖြင့်သိပ္ပံပညာရှင်များက NMN စားသုံးမှုသည်လူသားများအတွက်ဘေးကင်းမှုရှိမရှိသက်သေပြရန်လိုအပ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ထို့ကြောင့်၊ မကြာသေးမီက 2019 ခုနှစ်တွင် Keio တက္ကသိုလ်ဆေးကျောင်း၏လက်တွေ့စမ်းသပ်ခန်းတွင်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင်အသက် ၄၀ နှင့် ၆၀ ကြားရှိအမျိုးသား ၁၀ ဦး ဖြစ်သည်။ ထိုလူများကို ၁၀၀ မီလီဂရမ်မှ ၅၀၀ မီလီဂရမ်အထိထိုးပေးခဲ့သည်။ လေ့လာမှုတွင် NMN သည်လူသားများစွာသည်းခံနိုင်ပြီးစားသုံးမှုကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားသရွေ့စားသုံးရန်လုံခြုံမှုရှိသည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ ၎င်းလေ့လာမှုသည်လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးအပေါ်ယေဘုယျအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ပထမဆုံးပြုလုပ်သော NMN လေ့လာမှုဖြစ်သည်။ NMN သုံးစွဲမှုသည်လုံခြုံမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိသည်နှင့်ထုတ်လုပ်သူများသည် NMN ဖြည့်စွက်မှုများဖြင့်စျေးကွက်ကိုစတင်ထိုးဖောက်ခဲ့သည်။
ဤအပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နီကိုတင်းနိုက်မိုနွန်ကူလိုotideသို့မဟုတ် NMN အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ဆက်စပ်သောအလားအလာရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။
① NMN အိုမင်းခြင်းနှေးကွေး
NMN ၏အကြီးမားဆုံးအားသာချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည်အိုမင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှေးကွေးစေသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကနာမည်ကျော်သြစတြေးလျဇီဝဗေဒပညာရှင်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇပါမောက္ခ David Sinclair က NAD + သည်အိုမင်းခြင်းကိုနှေးကွေးစေခြင်းနှင့်လူသားများတွင်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုသက်သေပြခဲ့သည်။ သို့သော် NAD + ထုတ်လုပ်မှုသည်အသက်အရွယ်နှင့်အတူလျော့နည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့်လူအိုများလာသည်နှင့်အမျှသူတို့၏အလောင်းများတွင် NAD + ရှေ့ပြေးလိုအပ်ချက်တိုးလာသည်။ NMN သည်ကစားခြင်းထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ NMN သည်ဆဲလ်ထဲသို့ ၀ င်ပြီး NAD + သို့မပြောင်းမီဓာတုပြောင်းလဲမှုများစွာပြုလုပ်သည်။
ကြွက်များတွင်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောဆီးချိုရောဂါကို NMN ပါးစပ်ဖြင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းကမည်သို့ကူညီခဲ့သည်ကိုလေ့လာရန်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကပါးစပ် NMN ဖြည့်စွက်ပေးသောကြွက်အင်ဆူလင်မှ sensitivity ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်၎င်း၏တိုးလာလျှို့ဝှက်ချက်ပြကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။ ဒီလေ့လာမှုက Nicotinamide Mononucleotide (သို့) NMN ပါးစပ်ဖြည့်စွက်ဆေးဟာဆီးချိုရောဂါခံစားနေရတဲ့လူတွေကိုကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသထားတယ်။
③ NMN သုံးစွဲမှုသည်နှလုံးကျန်းမာရေးကောင်းမွန်မှုနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်
NMN သည်ကြွက်များတွင်နှလုံးကျန်းမာရေးကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာရန်နောက်ထပ်လေ့လာမှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှုအရ NMN သည်အသက်အရွယ်နှင့်ဆက်စပ်သောသွေးကြောများနှင့်ကြွက်များတွင်ဆံချည်မျှင်သွေးကြောပျက်စီးမှုကိုပြောင်းလဲစေရုံသာမကသွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးတက်စေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးအချက်မှာကြွက်များတွင် NMN ပါးစပ်ဖြင့်ဖြည့်စွက်ပေးသောကြောင့်သွေးကြောသစ်များပေါက်ကွဲခြင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကအခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအနေဖြင့် NMN ၏ကြွက်များအတွင်းကျန်းမာရေးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဤလေ့လာမှုမှအလားတူရလဒ်များထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုများကသုတေသီများအား NMN သုံးစွဲမှုသည်လူသားတို့၏နှလုံးကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ပေးသည်ဟုယုံကြည်ရန်လုံလောက်သောအထောက်အထားများပေးခဲ့သည်။
Al အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါရှိသူများသည် NMN အသုံးပြုမှုမှအကျိုးပြုနိုင်သည်
အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူများတွင် NAD အဆင့်သိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသောလူများသည် NMN ကိုစားသုံးသောအခါ NAD + ပမာဏတိုးပွားလာခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်သည်တုန့်ပြန်သည်။ ၎င်းသည်မော်တာထိန်းချုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်စေခြင်း၊ SIRT3 ဗီဇလှုပ်ရှားမှုတိုးစေခြင်း၊ ထို့ကြောင့်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါခံစားနေရသူများသည်စားသုံးခြင်းမှအကျိုးရရှိနိုင်သည် NMN.
⑤ NMN ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်
ခံတွင်း NMN ဖြည့်စွက်ဆေးသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ကျောက်ကပ်လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ဆက်စပ်သည်။ အကြောင်းမှာ NMN သည် NAD + နှင့် SIRT1 ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်နှစ် ဦး စလုံးကျောက်ကပ်လည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
သင် Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အမှုန့်အမြောက်အများကို ၀ ယ်လိုလျှင် NMN အမှုန့်ကို ၀ ယ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာမှာ cofttek.com ဖြစ်သည်။ Cofttek သည်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှစ၍ ဆန်းသစ်။ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည်ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိသောကုန်ပစ္စည်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်အတွေ့အကြုံရှိသူများနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသော R&D အဖွဲ့ဖြင့်ဂုဏ်ယူသည်။ Cofttek မိတ်ဖက်များရှိပြီး၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုတရုတ်၊ ဥရောပ၊ အိန္ဒိယနှင့်မြောက်အမေရိကရှိဆေးဝါးကုမ္ပဏီများသို့ရောင်းချသည်။ Cofttek မှထုတ်လုပ်သောβ-Nicotinamide Mononucleotide သည်အလွန်အရည်အသွေးမြင့်ပြီးလူစားသုံးမှုအတွက်လုံးဝလုံခြုံသည်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဤအမှုန့်ကို ၂၅ ကီလိုဂရမ်ယူနစ်များဖြင့်အမြောက်အများတင်ပို့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ရှာနေလျှင် အမြောက်အများ၌ဤအမှုန့်ကိုဝယ်ကြလော့, Cofttek သည်သင်ဆက်သွယ်သင့်သည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် - သူတို့သည်စျေးကွက်အတွင်းအကောင်းဆုံး Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများဖြစ်သည်။
(၁) ။ Yao, Z. , et al ။ (1) ။ Nicotinamide Mononucleotide သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကို Reverse လုပ်ရန် JNK ကိုတားမြစ်သည်။
(၂) ။ Yoshino, ဂျေ, et al ။ (2) ။ Nicotinamide Mononucleotide, အဓိက NAD (+) အလယ်အလတ်, Diet of Pathophysiology နှင့်ကြွက်များတွင်အသက် - သွေးဆောင်ဆီးချိုရောဂါကုသ။ ဆဲလ်ဖြစ်ပျက်မှု။
(၃) et al Yamamoto, တီ။ (3) ။ NAD + Synthesis ၏အလယ်အလတ်ဖြစ်သော Nikotinamide Mononucleotide သည်နှလုံးကို Ischemia နှင့် Reperfusion မှကာကွယ်ပေးသည်။
(၄) ။ ဝမ်, Y. , et al ။ (4) ။ NAD + ဖြည့်စွက်ချက်သည် AD Mouse မော်ဒယ်လ်အသစ်တွင်မိတ်ဆက်ထားသော DNA ပြုပြင်ခြင်းချို့တဲ့မှုဖြင့် Key Alzheimer ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့် DNA ပျက်စီးမှုတုန့်ပြန်မှုများကိုပုံမှန်ပြုလုပ်သည်။
(၅) Keisuke, O. , et al ။ (5) ။ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုမမှန်အတွက်ပြောင်းလဲ NAD ဇီဝြဖစ်၏သက်ရောက်မှု။ ဇီဝဆေးပညာသိပ္ပံဂျာနယ်။
(6) ။ egt စူးစမ်းလေ့လာရန်ခရီး။
(7) ။ Oleoylethanolamide (oea) - သင့်ဘ ၀ ရဲ့မှော်အရိပ်။
(8) ။ Anandamide vs cbd: ဘယ်ကျန်းမာရေးကပိုကောင်းတာလဲ။ သူတို့ကိုသင်သိထားသင့်သမျှ
(9) ။ နီကိုတင်းနိုက်ရိibosideကလိုရိုက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသင်သိထားသင့်သမျှ။
(10) ။ မဂ္ဂနီစီယမ် l-threonate ဖြည့်စွက်ချက်များ: အကျိုးကျေးဇူးများ၊ သောက်သုံးသောနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ။
(11) ။ Palmitoylethanolamide (ပဲ): အကျိုးကျေးဇူးများ, သောက်သုံးသော, အသုံးပြုမှု, ဖြည့်စွက်။
(12) ။ resveratrol ဖြည့်စွက်၏ထိပ်တန်းကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို6။
(13) ။ phosphatidylserine (ps) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(14) ။ pyrroloquinoline quinone (pqq) ကိုသောက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအကျိုးကျေးဇူးများ။
(15) ။ alpha gpc ၏အကောင်းဆုံး nootropic ဖြည့်စွက်။
ငါထင်တယ် NMN ဟာနီကိုတင်းနိုက်ဘိုက် riboside (NR) ထက်အများကြီးပိုထိရောက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအူသိမ်မှာပိုကောင်းအောင်စုပ်ယူနိုင်တယ်။
GeeHii ဦး နှောက်သုံးသပ်ချက်များ
လူများသည်များသောအားဖြင့်တစ်နေရာရာ ၂၅၀ မီလီဂရမ်မှ ၁ ဂရမ်အကြားရှိသူတို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်ပမာဏကိုရှာရန်လိုသည်။ သင်အသက်ကြီးလေလေပုံမှန်အားဖြင့်သင်အကျိုးရလေလေဖြစ်သည်။
Nicotinamide (NAM) ဖြင့်သာဖြည့်စွက်မထားပါနှင့်။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်လိုချင်တာကိုပြောင်းပြန်လုပ်တယ်။ အကယ်၍ သင်၏ခန္ဓာကိုယ် NAM ကိုပေးလျှင် NAD + ကိုလျော့နည်းစေသည်။
NR သို့မဟုတ် NMN တစ်ခုခုကိုရွေးပါ။ ထို့အပြင်အလီဘာဘာနှင့်အခြားတစ်စုံတစ်ရာသောဈေးပေါသောအရိပ်များကို ၀ ယ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။ ဒါဟာပစ္စည်းပစ္စယအများစုဟာအတုဖြစ်တယ်၊ သင့်ကိုတကယ်ထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြခဲ့တာပါ။
ကင်ဆာမဖြစ်ပွားမီကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပါကပိုမိုမြင့်မားသော NAD + အဆင့်များသည် DNA ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းနှင့် senescent ဆဲလ်များစုဆောင်းခြင်း၏အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေသင့်သည်။ NAD + ကိုအသုံးပြုသောကြောင့် NAD + မှီခိုသောကင်ဆာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောပြissueနာမှာ NAD + ကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံမှန်ဆဲလ်တွေလိုပဲလအနည်းငယ်တိုင်းမင်းရဲ့သွေးဖြူဥတွေကိုစစ်ဆေးတာကောင်းတယ်။ မင်းမှာကင်ဆာမရှိဘူးဆိုရင်အဲဒါကိုကာကွယ်သင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ mitochondria နှင့်စကားမပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်တစ်နှစ်ခွဲကြာပြီးနောက် nmn (ဘာသာဗေဒဘာသာ) ကိုသင်ယူပြီးလျှင်ကျွန်ုပ်၏အအေးမိနေသောလက်များမှထုတ်ယူရန်လိုလိမ့်မည်။
စွမ်းအင်များများစားစား (စွမ်းအင်သိုလှောင်ခြင်း၊ ကြိုးမဲ့စနစ်မရှိခြင်း)၊ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုများအတွက်ပိုမိုမြန်ဆန်သောပြန်လည်နာလန်ထူမှု၊ အိပ်စက်ခြင်းပိုကောင်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ပထမဆုံးကြွက်သားများကိုပင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
1g မှာဘာသာစကားနှစ်မျိုးပါတဲ့ NMN ကသိသာထင်ရှားတဲ့စွမ်းအင်ကိုပေးတယ်။ ငါချက်ချင်းသတိထားမိ ငါ့အမြင်လည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ ဒါ့အပြင်အရိုးငါးရာသီပြန်ရောက်နေပြီ။ ;-)
များသောအားဖြင့်လူတို့သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်သောဖြည့်စွက်ပမာဏကို 250mg မှ 1g အကြားရှာရန်လိုသည်။
ရှည်လျားသောခရီးအတွက်အထဲတွင်နေပါ။ အမာရွတ်ဟောင်းတွေပျောက်ကွယ်သွားတာ၊ ငါ့မျက်စိအောက်မှာအိတ်တွေလျော့နည်းသွားတာ၊ တစ် ဦး ရက်နာ၏လျော့နည်းအဖြစ်ကောင်းစွာအရာဖြစ်၏။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒီလိုကောင်းတဲ့၊ ရယ်စရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးကိုတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။